Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo » INew Delhi ijonge ukuvalelwa ngenxa yomsi onetyhefu ebulalayo
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo • iindaba • abantu • Xanduva • Safety • News Sustainability • Tourism • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
INew Delhi ijonge ukuvalwa ngenxa yomsi onetyhefu.
Umgangatho womoya eNew Delhi uye waba mandundu kwiveki ephelileyo ngenxa yezinto ezininzi, kubandakanya ukutshiswa kwezikhondo zezityalo kunye nokukhutshwa kwezithuthi kunye nomlilo weDiwali.
Elinye igosa lavuma enkundleni ukuba ukuphefumla umoya kwikomkhulu “kufana nokutshaya imidiza engama-20 ngosuku.”
Ibhodi yongcoliseko yaseIndiya iyalele urhulumente kunye nabasemagunyeni basekhaya ngolwesiHlanu ukuba balungiselele amanyathelo kaxakeka.
Amagosa aphakathi kunye naseburhulumenteni kufuneka enze "isigqibo esiphuthumayo" kwaye abonise izicwangciso zokulwa ne-smog ngoMvulo.
ENdiya kwinkundla ephezulu iyalele amagosa karhulumente ukuba enze "isigqibo esingxamisekileyo" kwaye abonise izicwangciso ngoMvulo, malunga nendlela yokujongana nomsi oyityhefu obugqume ikomkhulu ledolophu. New Delhi ngaphezu kweveki ngoku.
Ngaba uyazi ukuba imeko imbi kangakanani? Abantu kufuneka banxibe imaski nasekhaya, ”utshilo iJaji eyiNtloko uNV Ramana, eyolisa amagosa karhulumente.
Elinye igosa livumile enkantolo oko kuphefumla umoya New Delhi “yayifana nokutshaya imidiza engama-20 ngosuku.”
The enkantolo ifune amanyathelo angxamisekileyo ukuba aphunyezwe, kubandakanywa nokumisela ukuvalwa okufutshane kwikomkhulu.
Ibhodi yongcoliseko yelizwe iyalele urhulumente kunye nabasemagunyeni ngolwesiHlanu ukuba balungiselele amanyathelo kaxakeka.
Umgangatho womoya ngaphakathi New Delhi iye yaba mandundu kwiveki ephelileyo ngenxa yezizathu ezininzi, eziquka ukutshiswa kweendiza zezityalo kunye nokukhutshwa kwezithuthi. Imithombo yeendaba yaseIndiya yaphawula ukuba ukwehla kwenzeka emva komthendeleko weDiwali, xa abantu abaninzi bephula umthetho wokuvalwa komlilo.